शंखमुलको शानदार मःम: पसलको आगो नियन्त्रणमा, ८ तस्वीरमा हेर्नुहोस् खण्डहर बनेको पसल, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
शंखमुलको शानदार मःम: पसलको आगो नियन्त्रणमा, ८ तस्वीरमा हेर्नुहोस् खण्डहर बनेको पसल
आर्यन धिमाल , २८ जेठ २०७६
काठमाडौं। शंखमुलको शानदार मःम: पसलमा भीषण आगलागी भएको छ । आगलागीबाट शानदार मःम: पसल रहेको घरको भुइँतला पुरै जलेको छ । आगलागी भएपछि काठमाण्डु र भक्तपुरका दमकल आगो निभाउन पुगेका छन् । ग्यास लिक भएर आगलागी भएको बताइएको छ ।
आगो नियन्त्रणमा आएको छ । आगालगीका क्रममा शानदारमा कार्यरत एकजना मजदुर जलेका छन् । उनलाई उपचारका लागि नयाँ बानेश्वरको सिभिल अस्पताल लगिएको छ । आगलागीबाट भएको क्षतिको विस्तृत विवरण आइसकेको छैन । आगलागी स्थलमा प्रहरी पुगेको छ ।